Ekekọrịtara nkọwa nke oru ngo a na Mersin Metro Nkwalite Nzukọ | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinEkekọrịtara nkọwa nke oru ngo a na Mersin Metro Nkwalite Nzukọ
23 / 01 / 2020 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey, VIDEO
Ekekọrịtara ihe omume a na nzukọ Mersin Metro
Onye isi obodo nke Mersin Obodo ukwu Vahap Seçer kesara ọha na eze nkọwapụta nke ọrụ a na Nzukọ Mersin Rail System. Onye isi ala Seçer kwuru na a ga-anwale ụzọ dị nro na ma ihe owuwu na ego iji wee rụọ ọrụ na nke mbụ na Mersin wee kwuo, "Anyị ga-eti ngbata mbụ na 2020". N’igosipụta na ha ga-enye ụlọ ọrụ ndị a na-akwanyere ùgwù ọrụ, Onye isi ala Seçer kwuru, “Anyị ga-atụkwasịrị uru ọrụ a maka Mersin. Ugbu a, ọ bụghị nanị na Turkey, Mersin ụwa na-ekwu okwu, "ka o kwuru. Onye isi oche Seçer kwuru na opekata mpe pasent 50 nke ọnụahịa dị nro ga-adịgide n'ahịa Mersin, "puku mmadụ asatọ, n'ụzọ ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ga-enwe ohere irite uru na ya."
Nsonyesi ike na nzukọ mmeghe
Emechara Mersin Metropolitan Mịnịsta ahụ mee ka ọ dị nro maka akụkụ mbụ nke usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè na 27 nke December 2019. Onye isi ala Vahap Seçer na ndị ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ kọọrọ nkọwa nke oru a, nke ọha na-atụsi anya ya kemgbe ahụ.
Mgbe ọ na-ekwu okwu na nnọkọ mmeghe nke ndị ọwa ndị uwe ojii, ụlọ ọrụ ọkachamara na ndị otu na-abụghị nke gọọmentị, yana ọtụtụ ndị nta akụkọ, Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap Seçer kwuru, “Taa bụ ụbọchị dị mkpa maka anyị na maka Mersin. I lebaa anya na itinye ego n’ime ya, anyị na-enwe ụbọchị akụkọ ihe mere eme. Anyị na-enwe nzukọ ozi nke ọ bụghị naanị Mersin kamakwa ọrụ kacha mkpa na nke bara uru nke mpaghara anyị. ”
“Ọrụ na-egbu oge maka Mersin”
N'ikwu na usoro ụgbọ okporo ígwè bụ ihe atụ njem njem ochie na ụwa na enweghị aha ọma, obodo ukwu, akara obodo na obodo na-enweghị usoro ụgbọ oloko na ụwa, Onye isi ala Seçer kwuru na Istanbul zutere metro na afọ 32 gara aga, Konya, Eskişehir, Gaziantep, nke bụ ihe atụ nke Mersin, Ọ rụbara ama na etolitela ọdụ ụgbọ oloko na mpaghara ugbu a. Onye isi ala Seçer gara n'ihu dịka ndị a:
Anyị na-ahụta ya dị ka ọrụ na-egbu oge. Mersin bụ obodo nwere nnukwu akụkọ ntolite na ọdịnala na oke mkpa akụ na ụba. Lee, nchịkọta a ga-anyụ otu ụbọchị. Anyị nwere oke nchekwa. Ulo oru, ugbo, ihe nlere, njem, ikike di egwu. Anyị hụrụ na oge mbụ kentiyiz ọzọ dị nnọọ paradoxical ụzọ na anyị anya na Turkey ịda ogbenye map. Ọnọdụ anyị kwesịrị ido anya. Anyị kwesịrị imepụta afọ 50 na-esote. Ihe ị na-akpọ ụzọ ụgbọ oloko taa abụghị ọrụ na-apụ echi. Anyị na-ekwu maka narị afọ nke 18, narị afọ abụọ gara aga. Ọ ka dị irè taa. Ọ ka na-eme ya na Berlin, Moscow, Paris, London n'ihi na ọ na-agbakwunye uru obodo a. ”
“Mmụba n'ọnụ ọgụgụ mmadụ na-egosi na ọrụ a dị mkpa”
N'ikwu na onu ogugu nke Mersin na-abawanye ngwa-ngwa, ma atukwasiri ndi Siria na nti a, Mayor Seçer kwuru, “N’aho 2015, onu ogugu di otu nde na otu nde 1. Ọ ghọrọ 710 nde 2019 puku na 1. Mana mgbe afọ 814 gachara, enwere mmụba na-achọghị ịma nke pasent 2013. Ihe dị ka puku ndị ọbịa Syria atọ na narị ise. Ndị bi n’obodo anyị enweghị ike inweta nkwa nkwakọ ego nwa oge. N'ihi na ndị bi n’etiti obodo ahụ erughi ihe ha chọrọ. Mana taa, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi na ya bụ ọnụ ọgụgụ ndị kwabatara, ndị ọbịa na ndị gbara ọsọ ndụ bi ebe a. Ya mere, usoro ụgbọ okporo ígwè a abụghị ego na-enweghị isi. Mmụba a na-ekpughe na afọ ọrụ a abụghị ihe ndabere, ọbụlagodi mmụba ọnụ ọgụgụ mmadụ na-aba ụba na-eme ka ọrụ ahụ bụrụ nke ziri ezi ma kpochapụ nchegbu. N'ihi nke a, anyị ga-eji obi ike rụọ ọrụ ndị a. ”
"East-West akara na-shortened, North-South akara kwukwara, ọnụ ahịa bụ otu"
N'icheta na oru ngo obodo emere n'oge gara aga buru amụma nke ịdị kilomita 18.7 n'etiti Mezitli-Free Mpaghara, Onye isi ala Seçer kwuru na site na mmetụ aka ha mere na oru ahụ, ha belata ahịrị ahụ gaa kilomita 13.5. Seçer kwuru, "Enwere ụfọdụ nchegbu. 'Ihe oru a kwadoro na oru ngo ahia a di iche. Ma ọ bụghị. Mkpokọta ọnụ dị mkpa ebe ahụ. Ọnụ ego niile na-ada, nsogbu adịghị na ya. N'ime oru ochie, eriri ahịrị ahụ malitere site na Soli, anyị na-amalite n'ihu ụlọ ochie Mọnzitli nke ochie. Ihe ochie a na-agwụ na mpaghara Free, anyị na-egbukwa ya. Ọ ga-akwụsị na ọdụ ụgbọ ala ochie. Ọ sịrị, a ga-enwe nnukwu ọnụ ụlọ obodo.
N'ikwu na ha ga-ejikọ ụzọ East-West dị 13.5-kilomita ma nweekwa okporo ụzọ dị mma na Hospitallọ Ọgwụ City na ụzọ ụgbọ ala na Mahadum Mersin, Onye isi oche Se ,er kwuru, "Ya mere ihe a niile bụ ụgwọ ọnụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'okpuru ala 18.7 anyị hụrụ n'apata anyị. . Ọ na-aga 30.1 km. Usoro agwakọtara mana ọnụ ahịa ya bụ otu. Ya mere, ebe ego anyị agbanwebeghị na mmemme mkpuchi anyị, itinye ego anyị ga-etinye na mbụ enweghị nsogbu iwu ”.
“Usoro ụgbọ oloko ga-adịtekwa azụmaahịa”
Onye isi oche Seçer mere ka ọ pụta ìhè na usoro ụgbọ okporo ígwè ahụ ga-emetụ ebe mmegharị mmadụ dị ka Mezitli, mahadum, ụlọ ọgwụ mahadum, Marina, Forum Mersin na Çamlıbel dị oke ọnụ wee kwuo, “Ndị na-ere ahịa Çamlıbel na-eyi ọnụ ụzọ anyị n'ụzọ ziri ezi. Mgbasa ahụ agabigawo, Mersin agwụla. Mersin enweghị etiti. Ọ dị ezigbo mkpa. Nke a abụghị naanị maka njem ụgbọ njem. Ihe omume mmekọrịta ọha na eze. Ogige Özgür Çocuk nwere ọdụ ebe ahụ. Ingbọ oloko nwere ọdụ ebe ahụ. Anyị na Çamlıbel zukọrọ. Ọ bụrụ na nwanne nwoke si Mezitli na nne m chọrọ ịbịakwute Çamlıbel ma zụọ ahịa, ọ ga-abata na nkeji iri, mana ugbu a enweghị ike. Agbanyeghị na ọ bụ ụgbọ ala nke onwe, ọ bụụrụ ya ofufe, ọ bụrụ na ọ banye n'ụgbọ njem ọhaneze, ọ bụụrụ ya ofufe. Angbọ njem ọha na-achaghị acha, ngwa-ngwa, ntụsara ala, enwere ike ịbịaru obodo mfe n'ụzọ dị mfe. Anyị tinye Çamlıbel na njikọ a. ”
“Pasent 50 nke ọnụ ahịa dị nro ga-adịgide na Mersin”
N'ikwu na ha na-achọ ịkwụ ụgwọ na 27 nke ọnwa Disemba 2019 maka usoro ụgbọ oloko, Onye isi ala Seçer kwuru:
“Ihe owuwu a ga-enyere anyị aka ịgagharị. Naanị mpaghara mbu, enwere ọrụ puku anọ ruru puku anọ. Na mgbakwunye, puku mmadụ anọ kachasị eduzi na-erite uru. Ebe ọ bụ na ọmịiko ahụ na-aga n'ihu, anyị enweghị ike ikwu ọnụ ọnụ ọmịiko, mana pasent 4 nke ọnụ ahịa ọmịiko ga-adịgide n'obodo. A ga-azụta ndị ọrụ, ụgwọ enyere, ngalaba ụlọ ọrụ, ihe ndị achọrọ n'ime ihe owuwu a ka Mersin zụta. Nọmba ndị a bụ nnukwu ọnụọgụgụ. Oge owuwu 4. Enwere nhọrọ ọzọ nke ọnwa 50. Linessdị ndụ akụ na ụba ga-agbaba ajụjụ a. 3,5 ndị mmadụ, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ga-enwe ohere iji rite uru na ya. ”
“Achọsi ike dị nro”
Họrọ Nga nzere obi ga-ẹkenịmde ke February 27, na President chetaara, Turkey ke akpatre 18 ọnwa na a ọnụ ọgụgụ, na dọọrọ uche gaa a obi mere na a ndabere iwu kwadoro. Seer kwuru, "Maka nke a, ọ dị oke mkpa. Ugbu a ahịa bụghị naanị na Turkey, Mersin na-ekwu okwu ụwa. Onye na abataghi n’ime ọnwa ole na ole gara aga? Turkey kasị na-akwanyere ùgwù dị iche iche, ndị kasị agadi uloru, bụ ya mettle ụlọ ọrụ, ụlọ na ndị mba ọzọ bịara n'ikperé mmiri. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ego na ụlọ ọrụ ndị na-ewu ụlọ, sitere na Spanish, ndị Luxembourgers, ndị China, ndị Jamani, ndị France, na-eleta mpaghara anyị. Ha nwere mmasị n'okwu a. Anyị na-ma mbụ oge na ego a ọnụ ọgụgụ na Turkey ruo taa anyị na-aghọta a oru ngo na a na-ewu obi ọnụ. Enwere nnukwu ihe. Emela 'ụfọdụ ọnọdụ na Turkey, e nwere a mkpi na ahịa. Ekwula ‘onye isi ala nọ n’ụwa nrọ. Mba ọ bụghị. Onwere ego di n ’uwa, ezigbo ego. Ha na-achọ ọdụ ụgbọ mmiri dị nchebe ị ga-aga. Enwere nnukwu choro maka oru a. Enwere m oké ọchịchọ. Anyị ga-enye ọrụ a na teknụzụ kachasị ọhụrụ, ụlọ ọrụ bara uru ma na-akwanyere ùgwù n'okpuru ọnọdụ dị oke mma. Anyị ga-akụ pickaxe nke mbụ n’afọ 2020 n’enweghị mgbagha. Achọpụtara m nke a nke ọma, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, m wee jiri obi m niile kwere na ọrụ ahụ. A na m akwado ọrụ ahụ wee jidesie ike ma na-ekwu kwa. Anyị ga-eme nke a n’oge. Ọ ga-agbakwunye ọtụtụ na Mersin. Naanị njem dị mma nke onye njem, anyị ga-atụkwasịrị ọtụtụ uru na Mersin. Nke a bụ ihe anyị na-achụ. ”
"Echere m na ụlọ ọrụ 15 nwere nnukwu ọchịchọ ga-alụ ọgụ n'ụzọ dị nro a"
Onye isi ala Seçer kelere Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan maka ọrụ a na-etinye na mmemme itinye ego na ntanetị 2019. N'ikwu na ha ga-anwa ime ka ọrụ a bụrụ ihe a na-eche na nkwakọ ego sitere n'aka gọọmentị etiti, Onye isi ala Seçer kwuru, “Nke a na-eweta; na - ekpughere uzo esi abanye ego na ego. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị njedebe nke ụwa. Anyị etinyebeghị ọnọdụ nkwa nchekwa Akụ Akụ na obi anyị. Anyị ekwughị na anyị ga-ekwe nkwa nkwakọba ego, n'okpuru ọnọdụ dị ugbu a, ihe karịrị ụlọ ọrụ iri anọ ebudatara faịlụ a ugbu a na EKAP. Ihe m chere bụ na ụlọ ọrụ 40 nwere oké ọchịchọ ga-alụ ọgụ n'ụzọ dị nro a. Ihe oru ngo a gbasara ndi Mersin niile, anyi nile, ndi na - eme ihe nile. Ọ bụ oru ngo nke onye ọ bụla kwesịrị ịnabata, site na ndị njikwa bara uru, ndị isi ala, ndị isi oche, ndị nnọchi anya NGO, ndị nnọchite anya otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo ndị isi ụlọ ọrụ, ndị bi na Mersin na ndị otu akwụkwọ akụkọ bara uru. Ihe oru ngo a doro anya. Anyị anaghị ewere ya n'echiche nke 'anyị mere ya'. Ọ bụrụ na enwere mmejọ ma ọ bụ nleghara anya, ọ dịịrị anyị idozi ha. Anyị na-achọ ịchọta onye zuru oke, ime eziokwu, ọ bụghị iji mee mmadụ obi ụtọ. Anyị chọrọ ime ihe Mersin, ndị Mersin ma tinye uru na Mersin. ”
“You ga-ahụ na e nweghị ihe na-echegbu gị”
Na mmeghe mmeghe nke ọrụ a, Mersin Metropolitan Municipality Rail Systems Branch Manager Salih Yılmaz na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndozi anya nke kwadebere ọrụ ahụ nyere nkọwa banyere nkọwa teknụzụ nke oru ahụ. Na nzukọ ahụ, ndị nnọchi anya nke ndị ọrụ gọọmentị, ndị odeakụkọ na ndị isi echiche nwekwara ohere iji jụọ ajụjụ banyere oru a wee nweta azịza nye ajụjụ ha.
Maazị Seçer, onye bịara na podium ahụ ọzọ mgbe ndị ọrụ aka ọrụ zara ajụjụ ndị ahụ, kwuru, “enwere nchegbu. M ekweta. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịbanye nkọwa. Ebe ọ bụ na anyị abịarutere na njikwa ahụ, anyị nwere nzukọ atọ anyị gbasara ọdụ ụgbọ oloko. Anyị anaghị eme ihe ọ bụla. Ọ bụghị egwu. Anyị nwere ike mezuo nke a. Nchegbu nwere ike izi ezi, mana ị ga - achọpụta na o nweghị ebe o bi. Anyị nwere olile anya na anyị ga-agbakọ ọnụ dịka ndị na - eme ihe nkiri n'obodo. ”
Ole n'ime njem ole ka MERSINI RAIL SYSTEM ga-ebu?
* Usoro nke mbụ nke usoro ụzọ Mersin ga-agbaso ụzọ Mezitli-Marina-Tulumba-Gar.
* N’afọ 2030, ọnụ ọgụgụ ndị na-ebugharị njem ọha na eze kwa ụbọchị ga-adị otu nde mmadụ na narị puku abụọ. Ebumnuche bụ iburu usoro 1 ụzọ nke a na usoro ụgbọ oloko.
* A na-atụ anya ọnụ ọgụgụ ndị njem Mezitli-Gar (West) dịka ụbọchị 206 puku 341. Onu ogugu ndi njem n’otu oge dika 29 puku 69.
* 62 puku 263 nke a ga-abụ ndị njem na Mahadum-Gar ụzọ, 161 puku 557 ga-abụ ndị njem na ụzọ Mahadum-Hal.
* A ga-enwe ndị njem 67 63 kwa ụbọchị n'okporo ụzọ Gar-Huzurkent, yana ndị njem 92 iri atọ na atọ kwa ụbọchị n’etiti Gar-OSB.
* Onu ogugu ndi njem bu ubochi ato gadi puku mmadu iri-isii na iri n’abuo n’agb ’ulo ogwu Gar-Otogar-Şehir, na puku mmadu iri ato na ano, puku mmadu ano na abuo n’agbata isi ugboala Gar-Şehir.
* N’ahịrị nke Mezitli-Gar, ga-enwe mita 7930 nke ịkpụpụ na 4880 mita nke ọwara tube.
* A ga-enwe ebe a na-adọba ụgbọala 6 na ọdụ ụgbọ ala 1800 na igwe kwụ otu ebe na ebe a na-adọba ụgbọala.
G AREN ARE B SPR SP AK TEKỌ AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ MERSINI RAIL?
Ogologo ahịrị site na Mezitli ruo Gar: 13.40 km
Ọnụ ọgụgụ ụlọ: 11
Mkpa isi Cross: 5
Usoro ihe mberede: 11
Dị tunnel: tube dị otu (9.20 mita n'ime ya) na ngalaba mepere emepe
Speedgba ọsọ kacha arụ ọrụ: 80 km / h Ọsọ ọrụ: 42 km / h
Oge iji gaa njem: nkeji iri abụọ na atọ
Ogologo okporo uzo oku di n’etiti Eski Otogar-Şehir Hastanesi na Station Bus: 8 891 metres
Ọnụ ọgụgụ ụlọ: 6
Ulo dị n’agbata Fair Center na Mahadum Mersin: 7 puku mita 247
Adapazan - Istanbul Northern Crossing Railway Usoro EIA amalitela.
Ozi na Sistemụ Ntọala Ọnọdụ Ego nlele na okporo ụzọ…
E mere nzuko nke Mersin Metro
The nkọwa nke Marmaray oru ngo, na Minister Yildirim
Otu òkè ahụ na Nna ya
Mualla Günsav nwụrụ: bitterbọchị ilu nke Yapıray Railway Construction RayHaber otu ...
Enweghị ike ịkekọrịta TCDD ikpeazụ Train Land
Mersin City Hospital okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Nzukọ Mersin Rail System Mgbakọ